Iza no fitaovana tsara indrindra ho an'ny mpanamboatra bakalorea ary ahoana no fampiasana izany?
Raha ny amiko, ny dingan'ny fananganana rohy dia tsy toy ny fanaintainana araka ny eritreritry ny maro. Etsy andaniny, misy an-jatony ireo sehatra an-tserasera samihafa mifidy, raha ny marina, ny ankamaroan'izy ireo dia misy amin'ny fidirana mivantana. Etsy andaniny anefa dia tsy misy fitaovam-pambolena manerantany ho an'ny daholobe izay mety hialana amin'ny toe-javatra mety. Nahoana? Satria fotsiny ireo fotodrafitr'asa fototra dia mitovy amin'ny 9 amin'ny 10 ny tetik'ady fanorenana mifandraika. Raha ny marina, ny fitaovana fananganana rohy rehetra hita ao amin'ny aterineto dia hiasa toy izany - ny fitadiavana ny fisainana mety, ny fametrahana azy ireo, ny famoronana fifandraisana, ary ny farany amin'ny fikarakarana rohy tsara.
Na dia izany aza, ny fisafidianana ny fitaovana fanorenana havanana dia mety hahatonga azy ireo ho tsara kokoa. Koa, etsy ambany aho dia hanana fifanakalozan-kevitra fohy momba ireo sokajy telo lehibe amin'ny fitaovana fananganana rohy nalaina tamin'ny ankapobeny. Ho famaranana ny fiheverana amin'izao fotoana izao ho an'ny fitaovana fanorenana "Ideal" ho an'ny mpanohitra, dia hametraka soso-kevitra maromaro kokoa sy ampiasaina aho amin'ny sokajy tsirairay. Amin'izany fomba izany, dia hahazo fahatakarana tsara kokoa ny antony ilainao azy ireo ianao, mba hampiasana fitaovana mahomby sy azo ampiasaina amin'ny fitaovana tsara indrindra amin'izao fotoana izao.
Alohan'ny zavatra hafa, avelao hiatrika izany - ny fividianana rohy na fampiharana ho an'ny rohy PBN-nao dia mety ho tena mampidi-doza. Noho izany dia hifantoka fotsiny amin'ny fitaovana fitaovan'ny rindrambaiko tsirairay izay miasa tanana izahay. Midika izany fa hodiako ireo rafitra malaza indrindra amin'ny aterineto izay ampiasaina hitady, handinika sy hitsambikina amin'ireo fahafahana vaovao. Noho izany dia soso-kevitra aho fa manana fitaovana mifandraika amin'ny sokajy telo lehibe, toy izao manaraka izao: endriky ny backlink, fitaovana fanodinana, ary fitaovana fitantanana fitadiavana.
Indeksam-bokim-pitaovana ampiasaina dia ampiasaina mba hahitana ireo backlinks rehetra mitarika mankany amin'ny URL iray na dom-ponenana iray. Ny fahazoana miditra amin'ny endriky ny fitaovana toy ny backlink dia mety ho tena mahasoa ny mahita sy manombatombana ny mety ho endri-pifandraisana sy ny toetoetra, ohatra, ny vatofantsika.
Raha ny endriky ny rohy dia misy safidy telo lehibe, ny tsirairay mitazona andian-tsarimihetsika tokana manokana, izay matetika mifandray amin'ny pejy fahatokisana sy ny fahefana. Noho izany, ny safidinao amin'ny fisafidianana fitaovam-pambolena ho an'ny backlink dia mety ho anisan'ny Ahrefs, Majestic, na Moz.
Fitaovana fanodinana fanaovan-drakitra
Mifanohitra amin'ny indexl backlinks, ireo fitaovana fanodinana ireo dia ampiasaina mba handinihana ny angona isan-karazany (ao anatin'izany ny indexes). Ny fampahalalana avy amin'ny loharano maro dia noraisina mba hijerena sy hanodina amin'ny ambaratonga. Betsaka ny fitaovam-pivarotana bakalorea dia tsara koa amin'ny fandikana ireo angona mavesatra ho fampahalalana mahasoa sy azo ampiharina. Ankoatr'ireo hafa dia mamporisika ny fanaovana teti-bola profiler, Alexa, Semalt Analyzer, na fitaovana fisoratana Scrapebox miaraka amin'ny fanampim-panazavana samihafa, ho an'ny rohy rava sy ny fijerena ny pejy momba ny fahefana manokana.
Ny fitaovam-pamboaran'ny fitaovana fanorenana rehetra dia mila entina indrindra raha ny ankamaroan'ny boky tetikady. Midika izany fa rehefa vita ny famerenana ny famerenam-bidy amin'ny farany, dia mila fitaovana manokana ianao hikarakarana sy hanitsiana ny fitetezana an-tserasera. Ireto misy safidy maromaro izay soso-kevitro omena anao: Pitchbox, Buzzstream, Ninja Outreach, Mailshake, na Gmass Source .